Imibuzo evame ukubuzwa - Eecycle Tianjin Technology Co., Ltd.
Q: Itholakala kuphi inkampani yakho?
A: Imboni yethu itholakala eDongli esifundeni saseTianjin, eChina.
Q: Yini inzuzo yakho?
A: (1) .Siyifektri enesipiliyoni seminyaka engaphezu kweshumi sokukhiqiza nokuthekelisa
(2) Sine-workshop yethu yohlaka, i-workshop yokudweba, nokuhlanganisa i-workshop
(3). Umklamo wobungcweti nethimba le-R & D, lingaklama imigqa yomkhiqizo nemikhiqizo yamakhasimende
(4). Eduze kweTianjin port, esebenza kahle kakhulu, kungasiza amakhasimende ukuthi agcine impahla
(5). Ikhwalithi ephezulu kanye nesevisi efike ngesikhathi
Q: Ngingathola amasampula?
A: Siyahlonishwa ukukunikeza amasampula wokuhlolwa kwekhwalithi. Kuthatha cishe ama-3-4weeks ukuthola amabhayisikili wesampula elungile ngemuva kokuthola inkokhelo yakho ephelele yesampula.
Q: Iyini ubuncane be-oda lakho elincane?
A: I-MOQ yethu isiqukathi esingu-1 * 20ft, amamodeli nemibala ingaxutshwa kulesi sitsha, imvamisa sicela i-MOQ ngemodeli / umbala ngamunye: 30pcs.
Q: Uyayamukela imiyalo ye-OEM yekhasimende?
A: Yebo, singenza ibhayisikili ngokuya ngemininingwane yekhasimende, ukuhlanganiswa kombala ngisho ne-logo / design, kanye nesicelo sephakheji.
Q: Unayo yini imikhiqizo esitokweni?
IMP: Cha. Wonke amabhayisikili kufanele akhiqizwe ngokuya nge-oda lakho kufaka phakathi amasampula.
U. Sithini isimo sakho sekhwalithi yebhayisikili?
IMP: Iqiniso lokuthi lokho esikhiqizile konke kumakilasi aphakathi / aphezulu emakethe yomhlaba, kuvalwa uphawu lwe-A emhlabeni. Ngenkathi, amazwe ahlukene anezinga elihlukile lekhwalithi, njenge-CPSC eMelika, i-CE emakethe yaseYurophu, ikhwalithi yethu yebhayisikili ingashintsha kancane, ngokuya ngezindinganiso nemithethonqubo emazweni okuthengiswa lapho uya khona.
U. Iyini imigomo yakho ukupakisha?
A: Ngokuvamile, sipakisha izimpahla zethu ngamabhokisi ansundu angathathi hlangothi. Singamukela futhi i-85% yokupakisha ibhokisi elilodwa, ukupakisha nge-100% ngobuningi nokupakisha ngokwezifiso ngokuya ngezidingo ezikhethekile zekhasimende.
Q: Imboni yakho ikwenza kanjani ukulawula ikhwalithi?
A: Ikhwalithi iza kuqala. Sihlala sinamathisela ukubaluleka okukhulu ekulawulweni kwekhwalithi kusukela ekuqaleni kuze kube sekupheleni kokukhiqizwa. Yonke imikhiqizo izobuthelwa ngokugcwele futhi ihlolwe ngokucophelela ngaphambi kokuthi iqoqelwe ukuthunyelwa.
A: Yebo, sinokuhlolwa okungu-100% nokuhlolwa kabili nge-QC ngaphambi kokulethwa.
A: 1. 30% T / T njengediphozi, nebhalansi ngokuqhathaniswa nekhophi ye-B / L. Sizokukhombisa izithombe zemikhiqizo namaphakeji ngaphambi kokukhokha ibhalansi.
2. I-30% T / T njengediphozi ne-70% ngaphambi kokulethwa uma usebenzisa i-forwarder yakho noma i-agent. Sizokukhombisa izithombe zemikhiqizo namaphakeji ngaphambi kokukhokha ibhalansi.
3. L / C lapho ubona
Q: Iyini imigomo yakho yokulethwa?
A: Ngokuvamile, kuzothatha izinsuku ezingama-45-60 ngemuva kokuthola inkokhelo yakho phansi. Isikhathi esithile sokulethwa sincike ebuningini bakho bangempela nobunzima bemininingwane ye-oda lakho.
Q: Ngingaba yi-ejenti yakho?
A: Yebo, uma i-oda lakho lingafinyelela inani elithile, ibhayisikili: ama-8000pcs noma ibhayisikili kagesi ama-5000pcs ngonyaka, ungaba yi-ejenti yethu.
Q: Iyini iwaranti yakho?
Ezinye izinhlelo zikagesi: 1year
Uzimele nemfoloko: 2year
Izesekeli zemishini zokuphepha ezihlobene (njengezibambo, isiqu, isihlalo sokuthunyelwe ngocingo, crank): 1year
Izingxenye eziphukayo (njengamathayi angaphakathi, ukubamba, isali, ukuphehla): Akuqinisekisiwe
A: 1. Sigcina ikhwalithi enhle nentengo yokuncintisana ukuqinisekisa ukuthi amakhasimende ethu ayazuza;